Khabar Break - आखिर दोष कस्को ?
सम्झना रिजाल :
नेपालमा अहिले बैदेशिक रोजगारिकोलागि विदेश जानेहरुको सङख्या निकै बढ्दो क्रममा छ । जसका कारण देशले दक्ष जनशक्ती मात्र गुमाइरहेको छैन, धेरै दम्पतिहरुको बिचमा दरार पनि उत्पन्न गरेको छ । सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर परदेशिएकाहरु फर्किदा घर नै तहस नहस भएको हामीले आफ्नै गाँउ ठाँउमा देखिरहेका छौ ।
मकवानपुरमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धाहरु बढ्न थालेका छन । धेरै जसो समस्याहरु बैदेशिक राजगारीका कारण भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्दकी प्रमुख दिपा कार्की बताउनुहुन्छ । नेपाली परम्परा अनुसार जीवनभर साथ रहने प्रतिबद्धता गरेर वैवाहिक जीवनमा बाँधीएका श्रीमान श्रीमति असमझदारीकै कारण सम्बन्ध बिच्छेद गर्न अग्रसर हुन थालेका छन् । यो क्रम प्रत्येक वर्ष बढेको बढ्यै छ । जिल्ला अदालत मकवानपुरले जनाए अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालत मकवानपुरमा दुइ सय ८६ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भए । ती मध्य दुइसय २८ जोडीले सम्बन्ध बिच्छेद गराएको जिल्ला अदालत मकवानपुरले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ मा जम्मा दुइ सय २४ वटा मुद्धा दर्ता भएकामा एकसय ७५ जोडीले सम्बन्ध बिच्छेद गराएका थिए । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार श्रीमानश्रीमति बीच असमझदारी बढाउने कारण बनेको जिल्ला अदालत मकवापुरका श्रेस्तेदार अनन्तराज मरासिनी बताउनुहुन्छ ।
शंका मानविय गुण हो । ठीक्क मात्र शंका गर्दा सम्बन्धलाइ थप मजवुत बनाउन सकिन्छ भने धेरै शंका गर्दा सम्बन्ध बिग्रन्छ । बैदेशिक रोजगारिमा जाने पुरुषले पनि महिलालाइ पुर्ण रुपमा बिश्वास गर्न नसक्दा पनि यस्ता किसिमका घटनाहरु हुने गरेका छन । विवाह गरेको धेरै समय नबित्तदै श्रीमान परदेश जान्छन् । यता भने उनको जीवन संगिनिले न त परीवारलाइ राम्रो सँग चिनिसकेकी हुन्छीन न त श्रीमान साथमा हुन्छन, जीवन संगिनि एक्लै पर्छिन र पनि संर्घष गरीरहेकी हुन्छिन् ।
ति महिला माथि नजिकैका पुरुषको आखा पर्छ र फाइदा उठाउन खोज्छन, हो तिनै पुरुषले गरेको ब्यबहारको यदी प्रतिबाद गरीन् भने त्यही पुरुषले उनको श्रिमानलाइ कुरा लागाइदिन्छ तेरो श्रिमति नराम्रो काम गरेर हिड्छे । हो त्यति बेला खाँडिमा ४५ डिग्रीको घाममा काम गर्ने लोग्ने झस्कीनु स्वभाविक हो । उसले बिस्तारै श्रिमति प्रति शंका गर्न थाल्छ दिनदिनैको शंका असमझदारीले सम्बन्धमा खटपट ल्याउछ र बेलैमा नसोचे सम्बन्ध बिच्छेद सम्म पुग्छ । यहा दोष कस्को मान्ने, नव विवाहित भरभराउदो जवानी भएकी श्रिमतिलाइ चटक्कै छोडेर सुनौलो भविष्यको खोजिमा भौतारीने पुरुष की ? दिन रात उसकै याद मा हराउने ति श्रीमति या कुरा लगाउने छिमेकी ? आखिर दोष कस्को हो ?